トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Chii kazhinji Horukon boka configuration of nepachinko yaiitirwa
Boka configuration, pakupindurwa jackpot chiratidzo kubva configuration Hall nerimwe boka achava mumwe kuti kutumbura jackpot. The Strategy pechivanze conserver kubatwa, ndizvo zvave Dasa akafunga. Pano, imba conserver uchiriona kubatwa, tinoda kusuma chii anozivikanwa nevakawanda muenzaniso muboka configuration.
Boka configuration paruvanze conserver kubatwa, magumo nhamba configuration, divi-ne-divi configuration, zvinonzi kune mhando nhatu kwemashifiti configuration. Pakati pavo, kuti configuration hunonzi munyika zvikuru guru, divi-ne-divi configuration uye zvakasiyana-siyana vachinzi pakuguma configuration, asi haazivi kana ndiye pamutemo muzviitiko zvakawanda.
ndechokuti configuration ichi ndicho, divi-ne-divi configuration iri kuguma configuration zvakare, sokuti kuva chinhu kuti zviri nyore kuti asimbise nokuti chikonzero kuti zviri nyore vanozivikanwa. Nekuti hazvina chokwadi kuti inosimbisa kuti nepachinko yokumusoro anogona kutorwa, zvazova chokwadi kuti zvaizova saizvozvo yokufungidzira.
kune mugumo configuration, kuguma netafura ayo zvakabatana kunoitwa transformer nhamba ndiro pachikuva achava boka rimwe. 1 boka iri sokuti anenge mashanu nehasha. Somuenzaniso, muna 20 vamapoka chacho, zvichava kuti mapoka mashanu kune vari chitsuwa.
muzvikwata zvisina tsarukano ichi, nekuti yave kuitwa yose nepachinko yokumusoro achava chichemo paruvanze conserver kubatwa. Ari kuti kwaizova uyewo kazhinji, kurutivi-ne-kurutivi configuration, divi-ne-divi, yava nemapoka mana kusvika mashanu, kana mukuwana jackpot rotari, chokwadi kuti jackpot mairi ari kuparadzirwa chido iwe.
Zvisinei, mumakore achangopfuura, zvinonzi panewo nepachinko yokumusoro pakati vaiitawo yomugumo configuration uye parutivi-ne-divi configuration. Kana divi-ne-divi configuration uye kuguma configuration yakasananiswa, saka une zvakasiyana maererano chitsuwa, tingaziva hunonzi kuva zvishoma zvakaoma. Pakati
nepachinko parlors, uye chitsuwa divi-ne-divi configuration, kubva pachitsuwa kuguma configurations yakasananiswa, zvinonzi kutora nguva kutsvakurudza kana jackpot kwakaitika. boka iri -Loop weboka iri zvikuru zvisinei yokutevedzera akadaro, uye ipapo kunge akanyudzwa chete mirai nhamba, I chinhu jackpot kunoitika kakawanda mukati chete boka.
Asi munguva ichangopfuura, pane zvakawanda parlors nepachinko kuti makasimbisa mumwe transformer imwe kuti kudzivirira dambudziko. In ichi chinhu akatsanangurira kuvapo muzvikwata zvisina tsarukano aizova hatichamuzivi vanoomerera.
pfungwa boka configuration zvinofungirwa kuti muzasi nhamba jackpot hapana hwaro chete zvinoitika kuva pamwe chete. Mune nepachinko chitoro kuenda nemi, kunyange kana kwete boka configuration anotaurwa horo conserver kubatwa chichasimbiswa, zvingava zvinofadza kuti vatarire kamwe.